नेकपा विवाद: औपचारिक रूपले नफुट्दा उठेका पेचिला प्रश्नको जवाफ – Sulsule
नेकपा विवाद: औपचारिक रूपले नफुट्दा उठेका पेचिला प्रश्नको जवाफ
सुलसुले २०७७ माघ ९ गते १८:११ मा प्रकाशित
निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नलगाएकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई कित्तामा विभाजित छ, सत्ताधारी नेकपा र विपक्षी नेकपाको रूपमा।
सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवारमात्रै विपक्षी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना गरे। प्रचण्डले पनि यसअघि पटक-पटक ओलीको कठोर शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ। ओलीले पनि प्रचण्डलाई अध्यक्षमा यथावत् राखेर कार्यकारी अधिकार खोसेका छन्।
तैपनि दुवै पक्षले दुवै पक्षका नेताहरूलाई आफू नेतृत्वकै पार्टीमा राखेका छन्, निष्कासन गरिसकेका छैनन्। किन?
के फेरि जुट्ने सम्भावना छ?
प्रचण्ड पक्षीय नेता राम कार्कीका ठम्याइमा पार्टी फुटिसकेको छ।
तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा नेकपा फेरि जोडिने सम्भावना पूर्ण अन्त्य नभइसकेको कतिपयको अनुमान छ।
दुवैतर्फ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त त्यसको प्रयास गर्न भन्दै कुनै पनि खेमामा लागेका छैनन्।
तर नेता कार्की बिचारमा नेकपा अब जुट्ने सम्भावना छैन। उनको विचारमा नेकपा मात्र होइन अन्य दलमा पनि विभाजन आउँछ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेता सुवास नेम्वाङ भने एकताप्रति आशावादी छन्। उनी भन्छन्, “मलाई त पूरै आशा छ, एक ढिक्कै बनाउने हाम्रो मनसाय हो।”
आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको हुनाले कसैलाई कारबाही नगरेको बताउने नेता नेम्वाङका भनाइमा कानुनी रूपमा पार्टी अझै एक छ।
एकअर्काका बैठक र सभा सम्मेलनले ‘फरक अवस्था’ देखिएको भने उनले पनि स्वीकार गरे।
‘फाटेको जालले छोप्ने प्रयास’
नेवाङ भन्छन्, “हामी त एकताकै पक्षमा उभिएका पर्‍यौँ, त्यसैले भरसक साँच्चिकै व्यवहारमा पनि तलसम्म चिरा नपरोस् भन्ने पक्षमा हो। अहिले हामीले कारबाही गर्ने सोच बनाएका छैनौँ।”
तर कार्कीका ठम्याइमा एकअर्कालाई पार्टीबाट ननिकाल्नुको कारण फरक छ।
उनले त्यसलाई चालको संज्ञा दिए।
कार्यकर्ताहरूलाई आफू सहिष्णु, श्रेष्ठ र उदार रहेको अनि सबैलाई समेटेर लैजाने सोचाइ रहेको देखाउन त्यसो गरिएको उनको बुझाइ छ।
कार्कीले आफूले पार्टी जोगाउन निकै अपमानहरू सहेको प्रचण्ड पक्षले सुनाउनु अनि ‘ओलीले निजी आकाङ्क्षा, आवश्यक-अनावश्यक जरुरी-गैरजरूरी सबै कुरा आफूले पूरा गर्दै गएको’ बताउनुलाई त्यसकै अर्को उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
“त्यसैले अहिले पनि उनीहरू जनताबाट प्रमाणपत्र चाहन्छन्, त्यो महानता, सहनशीलता र दयाको निम्ति,” कार्की भन्छन्।
“यो त खुसीराम पाख्रिनले लेख्नु भएको गीत ‘फाटेको जालैले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको, हेर गाउँले हो’ जस्तै हो। त्यसैले यो त फाटेको जालले छोप्ने प्रयास मात्र हो।”
आन्दोलन: चुनाव प्रचार पनि?
विपक्षी नेकपाले देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा शुक्रवार काठमाण्डूमा दोस्रो सभाको आयोजना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव प्रचारमा लाग्न उनीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
कतिपयले आन्दोलनको आवरणमा ‘काङ्ग्रेस र प्रचण्ड पक्ष पनि चुनाव प्रचारमा लागेको’ ठान्ने गरेको पाइन्छ।
नेता नेम्वाङले त्यसबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। तर उनले जोसुकैले पनि सभासम्मेलन गर्दा संविधान, कानुन, मूल्य र मान्यता अनुरूप हुनुपर्ने बताए।
पूर्वमाओवादी नेता कार्कीले भने ‘नहुने चुनाव’ घोषणा गरिएको ठानेका छन्। सर्वोच्च अदालतले चुनावको बाटो खुला गरिदियो भने विपक्षी नेकपाले भाग लिन्छ?
“चुनाव हुने भए पो भाग लिने त, चुनाव हुने देखिन्छ कहीँ?” उनको प्रतिप्रश्न छ।
आन्दोलनको गन्तव्य के?
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको प्रचण्डपक्षीय नेकपाले अदालतले बाटो खुला गरिदियो तर उसले आशङ्का गरे जस्तै चुनाव पनि समयमा नहुँदाको विकल्पबारे पनि अनेक अड्कल भइरहेका छन्।
त्यसपछि आन्दोलनको माग फेरिए सर्वदलीय चुनावी सरकार हुन्छ वा अरू नै केही?
कार्की भन्छन्, “नेपालका निम्ति भविष्य अनिश्चित हुन्छ। कुन पक्षले जितेर जान्छ भन्ने कुरा रहन्छ। संविधान कुल्चिन सबै स्वतन्त्र भए।”
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब सात-आठ महिना भएको थियो। एउटा भिडिओ अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डलाई बीबीसीले सोधेको थियो: ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार विफल भयो भने विकल्प के? नेत्रविक्रम चन्द, नेपाली सेना वा कुनै प्रतिक्रान्ति?’
प्रचण्डको जवाफ आत्मविश्वासले भरिएको थियो, “यही सरकार सफल हुन्छ, यही पार्टी सफल हुन्छ, तपाईँ हेर्नुहोला, पाँच वर्ष पुग्दासम्म यो पार्टी नै नेपाली जनताको हित गर्ने र नेपालको समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्ने पार्टी नै स्थापित हुन्छ।”
“तपाईँले भने जस्तो कुनै परिस्थिति बन्नेवाला छैन।”
ओलीको प्रतिरक्षा गर्ने उबेलाका प्रचण्ड
सुरुवात प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो गाइँगुइँ त्यतिबेला चल्दै गर्दा उनले भनेको त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाबारे पनि बीबीसीको जिज्ञासा थियो।
तर प्रचण्डले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तथा समझदारीमा प्रगति भएको सुनाए।
समृद्धिको एजेन्डा नै मुख्य हो भनेर सरकारले बल गरिरहेको र थुप्रै कामहरू सुरु गर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डले भनेका थिए, “त्यसकारण यसलाई सफल पार्ने नै अहिलेको दायित्व हो। प्रधानमन्त्री, पार्टी वा सरकारको विकल्प खोज्ने अहिलेको एजेन्डा नै होइन।”
“त्यतातिर सोच्नु भनेको अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउनु बाहेक अरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”
प्रचण्डले उसबेला अस्वीकार गरेको अस्थिरता यतिबेला देशमा प्रकट भएको छ। तर यसको दोष भने दुवै पक्षले एकअर्कामाथि लगाइरहेका छन्।(बीबीसी)
संवैधानिक नियुक्ति: अदालतलाई सभामुखको जवाफ ‘दूषित र कपटपूर्ण निर्णय बदर…
अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल माथि उक्लँदा फाइदा कि बेफाइदा ?
छाउपडी प्रथाः धेरैतिर गोठ भत्काइए, तर छाउप्रथा कायमै रहनुमा ‘मनोवैज्ञानिक’…
नेपाली कांग्रेस: कांग्रेसको ‘पर्ख र हेर रणनीति’ परिपक्व कदम कि…
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि,थप…
भारतलाई नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो बजारमा पुर्‍याउने बाटो खुला
मुकेश काफ्लेलाई विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त !
दलहरुबीच समझदारी हुन्छ:सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा